समाचार - कास्ट आयरन टीपोटको फाइदाहरू
चियाको पहिलो सम्पर्कमा आएको केही समयपछि मेरो साथीले मलाई कालो जापानी फलामको केतलीसँग चिनायो र म तुरुन्तै विचित्र स्वादले आकर्षित भएँ। तर मलाई यसको प्रयोगका फाइदाहरू थाहा छैन, र फलामको भाँडा ज्यादै भारी छ। चिया सेट र चिया समारोहको ज्ञानको मेरो क्रमिक समझको साथ, मैले बिस्तारै सिकें कि यस फलामको भाँडामा चिया बनाउनका फाइदा वास्तवमै ठूलो हो! फलामको भाँडो राम्रो कुरा के हो भने यसले पानीको गुणस्तर सुधार गर्दछ र चियाको स्वादिष्ट स्वाद बढाउन सक्छ। मुख्यतया निम्न बुँदाहरूमा प्रकट:
फलामको भाँडोमा परिवर्तन हुने पानीको गुणस्तरमा चिया बनाउने फाइदाहरू
१. माउन्टेन स्प्रि effect प्रभाव: हिमालको ज under्गल मुनि बालुवा ढुstone्गाले वसन्त पानी फिल्टर गर्दछ र यसले ट्रेस खनिजहरू, विशेष गरी फलामको आयन र ट्रेस क्लोरीन समावेश गर्दछ। पानीको गुणस्तर मीठो छ र यो चिया बनाउनका लागि सबैभन्दा उत्तम पानी हो। फलामका भाँडाहरूले फलामका आयनहरू छोड्दछन् र पानीमा क्लोराइड आयनहरू लिन सक्दछन्। फलामको भाँडाहरू र पहाडका स्प्रि inहरूमा उमालेको पानीले यस्तै प्रभाव पार्छ।
२. पानीको तापक्रममा प्रभाव: फलामको भाँडो उमाल्ने बिन्दु बढाउन सक्छ। चिया बनाउँदा पानी ताजा पकाउँदा उत्तम हुन्छ। यस समयमा, चिया सूपको गन्ध राम्रो छ; यदि यो धेरै पटक उमालिन्छ भने, पानीमा विघटन भएको ग्यास (विशेष गरी कार्बन डाइअक्साइड) निरन्तर हटाइन्छ, ताकि पानी "पुरानो" छ र चियाको ताजा स्वाद धेरै कम हुनेछ। पर्याप्त तातो नभएको पानीलाई "टेन्डर वाटर" भनिन्छ र फलामको केतलीमा चिया बनाउन उपयुक्त छैन। साधारण टेपोटहरूसँग तुलना गर्दा फलामको भाँडोमा बढी समान तापक्रम छ। तातो हुँदा, पानीको तल्लो ठाउँमा र वरपरको तातो र तापक्रम वास्तविक उमालेको प्राप्त गर्न सुधार गर्न सकिन्छ। जब "Tieguanyin" र "ओल्ड प्युअर चिया" को रूपमा सुगन्धित चिया बनाउँदा, पानीको तापक्रम उच्च हुनुपर्दछ, र "कुनै पनि समयमा पियौ" पानीले चियाको सूपलाई राम्रो गुणस्तरको बनाउँदछ र पर्याप्त चिया प्रभावकारिता प्राप्त गर्न असफल हुन्छ। अन्तिम मजा;
जब हामी पानी उमाल्छौं वा फलामको केतलीमा चिया बनाउँछौं, जब पानी उमाल्छ, फलामले शरीरलाई चाहिने फलामलाई पूरक बनाउन धेरै भव्य आइरन आयनहरू छोड्दछ। सामान्यतया मानिसहरूले खानेकुराबाट ट्रिभलेन्ट फलामलाई अवशोषित गर्दछन्, मानव शरीर केवल%% देखि%% सम्म अवशोषित गर्न सक्दछ, र मानव शरीर फेरीक आयनको १ 15% लिन सक्छ, त्यसैले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ! हामीलाई थाहा छ कि चिया पिउनु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ, हामी किन अझ राम्रो गर्न सक्दैनौं?
अन्तमा, म तपाईंलाई फलामको केटलको मर्मत र प्रयोगको बारेमा सम्झना गराउन चाहन्छु: फलामका केटलहरू लामो समयको प्रयोग पछि सफा र सजीलो हुनेछन्। सतह प्राय: सुक्खा कपडाले पुछ्न सकिन्छ, त्यसैले फलामको चमक बिस्तारै देखा पर्नेछ। यो बैजनी र sand्ग भाँडो र Pu'er चिया जस्तै छ। यो पनि जीवन शक्ति छ; यो प्रयोग पछि सुख्खा राख्नु पर्छ। तातो भाँडोलाई चिसो पानीले धोएर वा उच्च स्थानबाट झर्नबाट जोगिनुहोस्, र यो याद गर्नुपर्दछ कि भाँडा पानी बिना सुकाउनु हुँदैन।
पोष्ट समय: जुलाई -१०-२०२०